Eenow ma iishay?! – Bashiir M. Xersi
Eenow ma iishay?!
Date: 5 Dec 2016Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Waxaa 01/12/2016 ku geeriyooday waddanka Talyaaniga Professor Cumar Eenow. Eebbe ha u raxmado. Professor Cumar Eenow, wuxuu ahaa bare jaamacad iyo aqoon, oo wax ka dhiga dalka Canada. Sida uu shaqooyin ka la duwan u soo qabtay.
Professor Cumar Eenow, wuxuu ahaa aqoonyahan, waaya’arag, aragsame iyo indheergarad dhaqan iyo hidde soomaali ku xeeldeeraa, ka sokow, in uu ahaa u dhaqdhaqaaqe xuquuqda Aadanaha iyo Insaanka.
Wuxuu aad u la dagaali jiray, faquuqa, isir nacaybka, habysooca iyo ka la sarraynteeda beeleed, qabiil iyo isir, ee soomaalida dhexyaal, marar badanna lagu saleeyo khayaali iyo mala’awaal!
Professor Cumar Eenow, wuxuu ahaa qof hadal cad, u hadla furcaddi iyo laalaab la’aan. Ma aqoon munaafad aqooneed iyo hadal la maldaho, si loo ilaalsho, wax aan ilaalsanayn, ka muhimsane, aanba ilaalayn Aadanaha iyo Soomaaliinnimada.
Waxaa aftahannimo eheed, qaababka, hannaannada iyo jaadadka deggan iyo daahiran, ee uu doodda, aragtida iyo qodobbada uu jeedin jiray, una soo gudbin jiray, isaga oo mar walba adeegsan jiray hadal bannaan yaal ah, oo aan u baahnayn fasir, fahamiisn iyo sharraxaad.
Wuxuu ku hadli jiray, dareen xambaarsan dhacdooyin maalmeedka, sida joogtada ah bulshada uga dhexdhaca, oo ka dhigaysa, dux qofka ugu gudbaysa si uusan ogayn.
Marar badan wuxuu is ka diiday, in uu siyaasadda galo, isaga oon waliba raadin xil, ee la la soo raadsaday. Waxaa ugu dambaysay, dawladdan sii dhammaadka ah, ee Xasan Sheekh Maxamamuud.
Rag lacag, laaluush iyo laalaab ayey xilal ku raadshaan, ka sokow, qabiil iyo beel, ka dib marka ay waayaanna waxay dib u badalaan aragtidoodii ama meelaha ka caytamaan, ragna, iyaga oon dhib, dhidid iyo u marin dhafar ayey soo doonatay, haddana, iga dhaafa dhahaan, kana dheeraadaan! Waxaasaa kaa aqoonyahan ah!
“In OGAAL AQOON yahay
AQOONINA OGAAL tahay
Ka ogina AQOON yahan
Ama uu Abwaan yahay
Kaan AQOON AGNAAN yahay
Ama uu engegan yahay
Igaar yahow ma moog tahay
Mise waad ogsoon tahay?.”
Ka sokow Prof Eenoow, wuxuu necbaa, oo aan la tusi jirin marna, dadka ka faana Soomaalinnimada iyo Afrikaannimada, dhalasho iyo deegaanba, ee ku dhedhega ama is ku dhejiya CARABNIMO aysan dheeheed lahayn dhan walba.
“Afrikaan inaan ahay
Asal Carabna igu jirin
Umaddeey u sheegoo
Ubadkeenna uga diga
Yey ku dhicin ilduufoo
La ajarin ayaankood
Aayahoodu yuu dhumin!”
Professor Cumar Eenow, geeridiisu waxay nagu furaysaa, daleel maran, oo aysan muuqan hadda qof buuxin kara, ee dulqaadkiisii, deeqdiisii, dadnimadiisa iyo daacadnimadiisii leh.
Ma jeclayn, in aan ugu baroordiiqo wixii uusan ka heli jirin wax ka mid ah, ee suugaan ah, oo sabab leehed, maadaama halabuurnimadii feker “war” laga kormarshay halabuurnimadii farsamo gacan iyo wax soo saar shaqo.
“Amar la ma huraaniyo
Arrin soo jireeniyo
Alab curada weeyoo
Ninna eedi maayee
Ifka ruux yimaadaba
Waxaa iman ayaantii!
Awood aan ku baajiyo
U ma lihi itaal weyn
Ammuur weeye iga weyn!
Anigoo og taas baan
Maqalay; “iilay Eenoow
Loo aroori iilkii”.
Ma la aasay Eenoow
Ma aguugmay araggii
Hadduu ruux aftahannimo
Ama yahay indheergarad
Aragtida ku caanbaxay
Eebbaan ku dhaartaye
Eenoow ayuu haa.
Oday waayo joogiyo
Astaan qaran ayuu haa.
Umadyahay ninkii mudan
Noo galay abaal weyn
U dedaalay maatida
Iyo ruuxii itaal daran
Waa in loo ogaadaa
Tilmaan aad u weyn iyo
Taallo loo asteeyaa.
Eenoow dadnimo guud
Codkar eray yaqaaniyo
Nin araah qurxooniyo
Arbe aan cabsooniyo
Ururshaha dadkuu haa.
Iyo eed ka dhawrkeed
Nin Ilaahay barayoo
Ayaan badan ayuu haa.
Misna ruux anshaxa guud
Edeb lagu mannaystoo
Aflagaadda iyo xumi
Isir sooc aqoonoo
Umaddiisa ka la dilin
Asluub badan ayuu haa.
Abid wuxuu u tagnaa
Amuu uu abuulay
Oolahana ugu jiray
Israac iyo midnimadiyo
Ummad wada siinnaatoo
Isbahaysi kaliya ah.
Isir iyo qabiil iyo
Beel iyo abkaa tahay
Ayaankaa ma doorshaan
Aqbal kuu ma keenaan
Abshir kuu ma dhaliyaan
Aayona ma curiyaan.
Ha ilduufin waligaa
Xaqa abid ha oodeyn
Is la weyni ka fogoow.
Asaggaa ha ceebayn
Islaannimada guud iyo
Ood nimaad wadaagtaan
Arlo aad ku dhaqantiin
Ha u quurin iimoo
Ha ku oran addoon yahay
Ha is moodin Carab iyo
Ibnu Haashin faracii!
Adigoonan eel falin
Ninna eed u yeelayn
Insaan meel uu joogaba
Intaan sheegay buu haa
In kaloo ka sii badan
Ruux mudan ammaano
Istaahila ayuu haa.
Allahii na uuntoow
Circa kii abuuroow
Awooddiis ku joojnoow
Adigaan ku barinnee
Albaabbada jannada iyo
U fur Eebbe naxariis
Ehelkood ka yeeloo
Il xareedle uga yeel.”
Previous Previous post: Disembar; bil murugo iyo gocosho badan!
Next Next post: Iyada iyo isaga: ka la rabid is ku raran!